मनमोमह स्मृती पोलिटेक्निकमा ‘मनमोहन स्पोर्टस् मिट २०७६’ सम्पन्न - News Birat
विराटनगर, फागुन १–मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिका–४ स्थित मनमोहन स्मृती पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युटले विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै यस वर्ष पनि भव्य रुपले १२ औँ ‘मनमोहन स्पोर्टस् मिट २०७६’ सम्पन्न गरेको छ ।
गत माघ २७ गतेदेखी बिहिबारसम्म खेलकुदका विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै ‘स्पोर्टस् मिट’ सम्पन्न गरेको हो । प्रत्येक वर्ष इन्स्टीच्युटको शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार ‘स्पोर्टस् मिट’ आयोजना हुँदै आएको मनमोहन स्मृती प्रतिष्ठानका सदस्य तथा इन्स्टीच्युटका सुचना तथा सञ्चार प्रमुख सत्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।
‘स्पोर्टस् मिट २०७६’ मा कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले फुटवल, भलिवल, क्रिकेट, व्याडमिन्टन, डोरीतान, म्याराथुन दौड, चेस र हाजिरि जवाफ प्रतियोगितामा भाग लिएका छन् ।
‘स्पोर्टस् मिट २०७६’ अन्तर्गत भएको फुटवल खेलमा इलेक्ट्रोनिक्स विभागले उपाधी हात पारेको भने इलेक्ट्रीकल विभागले उपविजेतामा चित्त बुझाएको छ । त्यस्तै भलिवलको उपाधी इलेक्ट्रीकलले जितेको छ भने इलेक्ट्रोनिक्स विभाग उपविजेता बनेको छ ।
त्यसैगरी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधी मेकानिकले हात पार्दा सिभिल विभाग उपविजेता बनेको ‘स्पोर्टस् मिट २०७६’ का संयोजक युवराज चौधरीले जानकारी दिए । डोरीतान प्रगियोगितामा सिभिल विजेता बन्दा मेकानिकल विभाग उपविजेता बनेको छ ।
त्यस्तै म्याराथुनमा बिजेता इलेक्ट्रोनिक्स र उपविजेता इलेक्ट्रीकल भएको छ भने चेस प्रतियोगितामा सिभिल विभाग प्रथम र इलेक्ट्रोनिक्स दोस्रो भएको इन्स्टीच्युटका सुचना तथा सञ्चार प्रमुख सत्यनारायण चौधरीले जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा मनमोमह स्मृती पोलिटेक्निकमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुबीच १ सय मिटर दौड प्रतियोगितासमेत भएको छ । महिला तर्फ भएको दौडमा साक्षी शर्मा प्रथम, समिक्षा पराजुली द्धितिय र मञ्जु सरदार तृतीय भएकी छन् । त्यसैगरी पुरुष तर्फको दौडमा देवेन्द्र ठाकुर प्रथम, सुजन भुर्तेल द्धितिय र तिलकराम चौधरी तृतीय भएका छन् ।
प्रतियोगितामा विजेता विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारी खेलाडीहरुलाई ट्रफि, मेडल र प्रमाणपत्र कलेजका प्राचार्य डा. शुभाष श्री पोखरेल, सिटिइभिटिका प्रदेश नं. १ प्रमुख डा. शिवप्रसाद दाहाल, सुचना प्रमुख सत्यनारायण चौधरी, प्रशासन प्रमुख मदन श्रेष्ठ, विभागियप्रमुखहरु लगायतले वितरण गरे ।
‘स्पोर्टस् मिट २०७६’ को समापन समारोहमा बोल्दै कलेजका प्राचार्य डा पोखरेलले विद्यार्थीले अध्ययनका अतिरिक्त खेलकुद क्षेत्रमा पनि चासो राख्नुपर्ने बताए । ‘पढेर मात्र हुँदैन । अतिरिक्त कृयाकलापमा पनि विद्यार्थीले चासो राख्नुपर्छ । एकोहोरो पढ्दा पढ्दा मात्र पनि विद्यार्थीलाई वाक्क दिक्क लाग्न सक्छ । त्सैले सिफ्रेस हुनका लागि पनि खेलकुद आवश्यक छ ।’ उनले भने,‘यसैलाई मध्यनजर गर्दै कलेजले प्रत्येक वर्ष स्पोर्टस् मिट आयोजना गर्दै आएको हो । यसले पक्कै पनि विद्र्याीलाई फ्रेस बनाएको छ । परिक्षा नजिकिन लागेको छ, अब फेरी अध्ययनमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सिटिईभिटिका १ नं. प्रदेश प्रमुख शिवप्रसाद दाहालले अध्ययन संगसँगै खेलकुद पनि आवश्यक रहेको बताए । उनले खेलकुदकै कारण विद्यार्थीको नेतृत्व विकाससमेत हुने बताए ।
बिहीबार, १ फाल्गुन २०७६, २२:३४ February 13, 2020 मा प्रकाशित